Galaxy Watch Active 2: Sarinà famantaranandro vaovao amin'ny famantaranandro | Androidsis
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanomboka tonga izy ireo tsaho maro momba ny Galaxy Watch Active 2. Toa ny Samsung dia hanolotra azy amin'ny 7 aogositra miaraka amin'ny Galaxy Note 10, na dia tsy mbola voamarina aza izany izao. Fa tsikelikely dia fantatsika izay antenaina ity famataran-jiro ity amin'ny resaka asany. Afaka jerena ihany koa ny volavolanao.
Navoaka ny sary vaovao an'ity Galaxy Watch Active 2 ity. Noho io dia hitantsika ny endriny natolotry ny marika Koreana amin'ity taranaka vaovao ity amin'ny famantaranandrony, izay mitazona endrika mitovy amin'ireo maodely voalohany, natolotra tamin'ny volana febintaona tamin'ity taona ity.
Ity taranaka vaovao ity dia ho tonga amin'ny habe roa, araka ny nambara iray volana lasa izay. Ka ireo mpampiasa liana amin'ny Galaxy Watch Active 2 dia afaka mividy ilay tena mifanaraka amin'ny tranga misy azy ireo. Toy ny tamin'ny taranaka voalohany, azontsika atao ny manantena fa hisy loko maro amin'izany.
Ny ankamaroany dia ireo fiasa vaovao izay mampanantena fa zava-dehibe. Araka ny Samsung dia manolotra ny electrocardiogram amin'ny famantaranandronao, satria efa misy ao amin'ny Apple Watch. Ity dia iray amin'ireo singa tena irina amin'ity sehatry ny tsena ity, izay azo antoka fa hanampy ny lazan'ilay fiambenana.
Aza adino izany Samsung dia mitombo haingana amin'ny varotra eo amin'ity tsena ity. Ka ny fanombohana ny Galaxy Watch Active 2 dia dingana iray hafa hitazonana io fironana miakatra io ary manakaikeza kely an'i Apple sy Xiaomi, izay no manjakazaka amin'ny tsenan'ny akanjo anaovana ankehitriny.
Raha mandeha mifanaraka amin'ny drafitra ny zava-drehetra, hihaona amin'ity famantaranandro vaovao avy amin'ny marika koreana ity isika amin'ny 7 aogositra amin'ny fomba ofisialy. Amin'ny hetsika fampisehoana ny Galaxy Note 10. vaovao ho an'ny zavatra mampanantena fa hetsika iray mahaliana ny mpampiasa. Mety misy vaovao amin'ity herinandro ity, ka hijanona tsy hiovaova isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Nanivana sary vaovao an'ny Galaxy Watch Active 2
Ny Galaxy M40 dia hahazo fanontana miloko voafetra ho an'ny Amazon Prime Day